५० लाखको सम्पति लिएर श्रीमती अर्कै संग फरार, रोजगारीका लागि खाडी गएका श्रीमानले रुदै गरे सबै संग यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) - दैनिक नेपाल न्युज
बिगत १२ बर्ष देखि रोजगारीका लागि साउदी पुगेका एक युवा रुदै एक्कासी मिडियामा आएका छन् । उनका अनुसार श्रीमतीले नेपालमा आफ्नो सबै सम्पति लिएर अर्कै संग फरार भएको जानकारी गराएका छन् । आजकल यस्ता घटनाहरु दिनानुदिन बढिरहेका छन् । यस्तै घटना उनको जीवनमा पनि घटेको भन्दै भाबुक हुदै बताएका छन् ।
ज्ञानु नाम गरेका पिडित युवा अहिले पनि साउदीमै रहेका छन् । उनका अनुसार श्रीमतीले भएभरको सबै सम्पति लिएर फरार भएको बताएका छन् । उनले आफुले दुख गरेर २/३ ओटा घडेरी जोडेको थिए त्यो सबै बेचेर फरार भएको जानकारी गरेका छन् । घरमा रहेको गरगहना , मोबाइल लिएर भागेको बताए । २ जना साना छोराछोरीलाइ छोडेर गएपछि उनले प्रहरीमा उजुरी गरेको पनि बताएका छन् । कस्तो थियो त श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध ? कसको गल्ति थियो ? तल भिडियोमा सम्पूर्ण विवरण जस्ताको तस्तै हेर्नुहोला ।
म्युजिक भिडियोमा अभिषेक र दिपिकाको प्रेम ( भिडियो )